Fumana iiKhonkco eziNgenayo ngokuLula neBlekko | Martech Zone
NgoMvulo, Matshi 19, 2012 NgoMvulo, Matshi 19, 2012 Douglas Karr
Yikholwe okanye ungakholelwa, uGoogle ayisiyiyo kuphela injini yokukhangela emhlabeni. Enye yazo eza kuluncedo kakhulu xa sisenza uphando lwethu kwiziza ezikwi-backlinks Blekko. Ilula njengokudibanisa / engenayo emva kwegama lesizinda:
Iziphumo ezikhuphayo zikunika amakhonkco kwindawo yakho kunye nombhalo we-anchor osetyenzisiweyo xa ubhekisa kuyo.
UBlekko uya kuxela umxholo ophindwe kabini kunye namakhonkco aphumayo, nawo!
tags: kukunikaamakhonkco esizindaiziqulatho ezingenayoukujonga izixhumanisi zedomeyini
Ishishini lezeNtlalontle, uHlaziyo loQhushululu